Wasiirka Gaashaandhiga Dowlada Federaalka iyo wafdi uu horkacayo oo Baladweyne tagay – SBC
Wasiirka Gaashaandhiga Dowlada Federaalka iyo wafdi uu horkacayo oo Baladweyne tagay
Wasiirka wasaarada Gaashaandhiga dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray maagalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan .
Wasiir C/xakiin Fiqi ayaa safarkiisa waxaa ku weheliyay safiirka dalka Jabuuti ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ay ku jiraan xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya.
Ujeedka ugu weyn ee wasiirku ku gaaray magaalada Baladweyne ayaa aheyd sidii uu ugu kuur gali lahaa xalaadaha noqoleed ee magaalada iyo ciidanka Dowlada iyo kuwa Jabuuti oo halkaasi ka howlgala.
Waxa uu wasiirku sheegay xili uu la hadlayay Warbaahinta in ay sidoo kale u yimaadeen ka la qeyb qaadashada munaasabadaha xornimada umada Soomaaliyeed iyo ciidamada Hiil walaal ee Dalka Jabuuti islamarkaana ku sugan gobolka.
Waxaa kale oo uu sheegay in inta uu ku sugan yahay magaalada uu kor u qaadi doono ka howlgalka ciidanka iyo kor u qaadista la dagaalanka xarakada Alshabaab oo uu sheegay in ay tahay muhiimada uu u socdo.
Mar uu ka hadlayay tabashooyin ka so baxay ciidanka dhinacyada mushaaharaadka iyo tasiilaadka kale ayuu sheegay in dhowaan sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban doono mushaarkoodiina si deg deg ah loo bixin doono.
Sikasataba ha ahaatee waxa ay ku soo aadeysaa imaanshaha wasiirka ee gobolka Hiiraan xili ay mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada baladweyne ay ka soconayeen howlgalo balaaran oo ay ciidamadu ku qabqabanayeen dad ay ugaga shakiyeen amaan xumo baaritaanna ku sameynayay xaafadaha magaaladaas ay ka koobantahay.